KhunMoung ' s: October 2007
Source : Forwardedfunnies.com
433MHz of AMD Processor
1 Gigabyte of Flash Memory
7.5inch 1200x900(200DPI) LCD Screen
Software Suite (Web Browser,Word Processor,Multimedia Authoring,Programming Tools)
Detail about specifications here
Promotion will begin on 12th November.
ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိဘဲ တစ်ခုခုဖွင့်လိုက်ရင် Send , Don't Send စတဲ့ Error Report နဲ့တိုးလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။
[Start] [Run] [gpedit.msc]
[Local Computer Policy]
Computer Configuration နဲ့ User Configuration နှစ်မျိုးကို တွေ့ရပါမယ်။
Windows Error Reporting ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Properties ကိုသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် ... ကလစ်နှစ်ချက်ခေါက်ရင်ဖြစ်ဖြစ် Message Box တစ်ခုတက်လာပါမယ်။
Not Configured / Enabled / Disabled မှာ Enabled ကိုရွေးပါ။ OK.
ဒါက Group Policy Editor ကိုသုံးပြီး Error Report ကိုပိတ်တာပါ။
နောက်တစ်ခုက Registry ပြင်တာ။
ညာဘက်ဝင်းဒိုးလွတ်တဲ့နေရာမှာ Right Click လုပ်ပါ။ New > DWORD Value ကိုရွေးပါ။
Value Name ကို DoReport လို့နာမည်ပေးပါ။
ဒါဆိုရင် Error Report တွေကို ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်ပါပြီ။
"The Noble Eightfold Path of Buddha"
သမ္မာဒိဌိ _ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို ကောင်းစွာသိမြင်ခြင်း
သမ္မာသင်္ကပ္ပေါ _ ၀ိတက်သုံးပါးမှကင်း၍ ကောင်းသောအကြံကို ကြံခြင်း
သမ္မာဝါစာ _ ၀စီဒုစရိုက်လေးပါးမှကြဉ်၍ ကောင်းသောစကားကို ဆိုခြင်း
သမ္မာကမ္မန္တော _ ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးမှကြဉ်၍ ကောင်းသောအမှုကို လုပ်ခြင်း
သမ္မာအာဇီဝေါ _ အဓမ္မိက၀ါဏိဇ္ဇငါးပါးမှကြဉ်၍ အသက်မွေးခြင်း
သမ္မာဝါယာမော _ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြစ်အောင်လုံ့လပြုခြင်း
သမ္မာသတိ _ နိဝရဏတရားစသည်တို့ကို အဖန်ဖန်အောက်မေ့ခြင်း
သမ္မာသမာဓိ _ ကုသိုလ်တရားတို့ကို အာရုံ၌ တည်ကြည်မြဲမြံစွာ ထားနိုင်ခြင်း
Eightfold Path (Universal Widsom Foundation)
Album_Sicence & Buddhism(1998)
Song Source : http://www.buddhanet.net/audio-songs_english.htm
Maha karuniko natho
Translation : The Lord , the Great Compassion for welfare of all beings.
Gtalk သုံးလို့ရတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ Gtalk အပြင် yahoo,msn,ICQ,QQ,IRC,AIM စတဲ့ chat programs အများကို Multiple Accounts နဲ့ တပြိုင်တည်း သုံးလို့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်ချနိုင်ပါတယ်။ ၀င်းဒိုးမှာသုံးဖို့ပါ။ တခြား system တွေမှာလည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Ubuntu နောက်ဆုံးဗားရှင်း 7.10 မှာ ပါပြီးသား package တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Linux မှာ Gaim ကိုပဲ သုံးရပါတယ်။ အခု Pidgin နဲ့က ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Ubuntu 7.10 မှာ တွေ့လို့ ၀င်းဒိုးအတွက်လည်း သုံးလို့ရမရ ရှာရင်း တွေ့တာ။ Chat တက်ဖို့အတွက် taskbar မှာ Gtalk,yahoo,msn,qq,icq တွေ စုပြုံနေစရာမလိုတော့ဘူး။ Pidgin တစ်ခုထဲနဲ့ ထိန်းထားလို့ရပြီ။ :)
သူ့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ရေးထားတာကိုလည်း သွားဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Tips n Tweaks တွေကိုတော့ Pidgin Blog မှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Public Awareness Advertisements
launched in Vietnam this summer
Source : http://www.asiainjury.org/home.asp
* Don't believe all you hear, spend all you have, or loaf all you want.
* When you say, "I love you," mean it.
* When you say, "I'm sorry," look the person in the eye.
* Never laugh at anyone's dreams. People who don't have dreams don't have much.
* Love deeply and passionately. You may get hurt, but it's the only way to live life completely.
* In disagreements, fight fairly. No name-calling.
* Don't judge people by their relatives, or by the life they were born into
* Open your arms to change but don't let go of your values.
* Read more books. Television is no substitute.
* A loving atmosphere in your home is the foundation for your life. Do all you can to createatranquil, harmonious home.
* In disagreements, deal only with the current situation. Don't bring up the past.
* If you makealot of money, put it to use helping others while you are living. It is wealth's greatest satisfaction.
* Marry someone you like. Love can wear thin at times.
ဆောင်းဦးရွက်ကြွေ မြေမှာဝေ နှင့် ဆောင်းဦးရွက်ဟောင်း ရော်ရွက်ညောင်းများ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများ မဟုတ်ပါ။ :D